Mesut Ozil oo ku maadeystay khabiiradii guusha u saadaaliyay Chelsea kulankii ay Wembley kaga qaadeen koobka FA Cup-ka. - Hablaha Media Network
Mesut Ozil oo ku maadeystay khabiiradii guusha u saadaaliyay Chelsea kulankii ay Wembley kaga qaadeen koobka FA Cup-ka.
HMN:- Kuabd sameeyaha Arsenal Mesut Ozil ayaa si yar ugu baashaalay khabiiradii saadaaliyay kulan ciyaareedkii Wembley ka dhacay ee final-ka FA Cup-ka kuwaas oo dhamaantood isku raacay iney guusha heli doonto Blues.
Kooxda difaacaneysa horyaalka ayaa guuldaro 2-1 ah ka qaadatay garoonka Wembley markii ay wajaheen Gunners oo u baahan iney koobka qadiimiga ah ku badbaadiso xilli ciyaareedkeeda sii xumaanaya.
Mesut Ozil wuxuu soo dhigay bartiisa twitter-ka sawirka saadaasha khabiirada ay ku xukmiyeen natiijada Wembley markaas oo lixda khabiir ay guulo wada siiyeen kooxda galbeedka London ka timaada.
Ozil wuxuu soo qoray kaliya “Saadaasha Khabiirada” isagoo adeegsaday emoji-ga qosolka sidoo kalana wuxuu raaciyay FA Cup iyo koobka uu ku guuleystay.
Alexis Sanchez ayaa hogaanka u dhiibay Gunners kulankii xalayto balse Diego Costa ayaa barbareeyay qeybtii labaad inkastoo Aaron Ramsey uu waqti yar kadib barbaraha kala diray Blues.